Before Kick Off by popolay.com
This section will be solely about the football news and everything about football inside Myanmar and around the world.
11 มิ.ย. 2562 | 618 Views
ဘောလုံးနဲ့ တစ်ဦးချင်းလိမ်ခေါက်ဖြတ်ကျော်ရာမှာ ဗန်ဒိုက်ကို မကျော်ခဲ့တဲ့အထဲ့မှာ ရော်နယ်ဒို ပါဝင်ခဲ့
11 Jun 2019 | 2,835 views လီဗာပူးလ် နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်ဟာ လီဗာပူးလ်ကို ရောက်ရှိပြီးနောက် ခြေစွမ်းပိုင်း အံအခန်းအောင် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ဆုဖလားတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ဒိုက်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကြီးကို ရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ အကေ
မော်ရင်ဟိုကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် နယူးကာဆယ်
10 Jun 2019 | 618 views မန်ယူအသင်းနှင့် ချဲလ်ဆီးအသင်းနည်းပြဟောင်း မော်ရင်ဟို ဟာ နောက်နှစ်ရာသီမှ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတစ်သင်းကို ကိုင်တွယ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုကို ခေါ်ယူဖို့ နယူကာဆယ်အသင်းက စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပြီး မော်ရင်ဟို က ဒီကိစ္စကို လက်ခံဆွေး
ဝတ်စလစ်ဖြင့် ကွင်းထဲ့ကိုဖြတ်ပြေးခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူးလ်ကစားသမားတချို့ ထံမှ မက်ဆေ့တွေရရှိခဲ့ကြောင်း ကင်ဆေး ဝေါ်လန်စကီး ဖွင့်ဟ
10 Jun 2019 | 2,810 views ကင်ဆေး ဝေါ်လန်စကီး ကို ဘောလုံးဖန်တွေ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူမက ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်ညတုန်းက ကွင်းထဲ့ကို ရေးကူဝတ်စုံနဲ့ ကွင်းထဲကို ဖြတ်ပြေးခဲ့တာကြောင့် လုံခြုံရေးတွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ အမေရိကန်မလေး ပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက သူမဟာ လီဗာပူးလ်ကစ
ဒီလစ်ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ လာကစားဖို့ ရော်နယ်ဒို ကွင်းအတွင်းမှာ ချဉ်းကပ်
10 Jun 2019 | 871 views ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုဟာ အေးဂျက်စ်အသင်းကြယ်ပွင့် ဒီလစ်ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ လာကစားဖို့ အတွက် ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ Nations league ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ ရော်နယ်ဒိုက ဒီလစ် အနားကိုကပ်ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ လာကစားမလားလ
Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းက ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးဆု ရရှိခဲ့သူများ
10 Jun 2019 | 900 views မနေ့က Nations League ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး အိမ်ရှင် ပေါ်တူဂီအသင်းက ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယဆုကို နယ်သာလန်အသင်းက ရရှိခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်အသင်းက ဆွစ်ဇာလန်ကို ပင်နတီမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး တတိယနေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Nations League ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး က
14 Jun 2019 | 2,458 Views
14 Jun 2019 | 609 Views
14 Jun 2019 | 2,148 Views
14 Jun 2019 | 3,969 Views
14 Jun 2019 | 866 Views
ချဲလ်ဆီး ကစားသမားလေး ပူလီဆစ်ထက် ဘောလုံးစကေးလ် ပိုသာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ကယ်လီ
07 Jun 2019 | 1,072 views ချဲလ်ဆီးအသင်း သို့ပြောင်းရွေ့ လာတော့မည့် အမေရိကန်ကစားသမားလေး ပူလီဆစ်ဟာ သူအမေနဲ့အတူ မီးဖိုချောင်ထဲ့မှာ ဘောလုံးစကေးလ် ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ အမေရဲ့ ဘောလုံးကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပြီးနောက် အများက ပူလီဆစ်ရဲ့ ဘောလုံးပညာဟာ သူ့ အမေဆီက ရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို
လီဗာပူးလ် ၊ ဗလင်စီယာ အသင်းတွေနဲ့ယှဉ်ယှဉ်ပြီး လှောင်ပြောင်ခံနေရတဲ့ မက်စီ
07 Jun 2019 | 910 views အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူး မက်စီဟာ သား ၃ ယောက်ရှိပြီး ပျော်ရွင်စရာ မိသားစုဘဝ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမှီက မက်စီဟာ သူရဲ့ သားတွေဟာ ဘောလုံးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောလာပြီး အိမ်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်ကို နိုင်တဲ့ အသင်းတွေနဲ့ အမြဲလေ
Nations League ဆီမီးဖိုင်နယ် နယ်သာလန် နှင် အင်္ဂလန်အသင်းတို့၏ ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် နှင့် ဟိုက်လိုက်
07 Jun 2019 | 1,050 views မနေ့ကညက နေရှင်းလိဂ် ဆီးမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်အဖြစ် အင်္ဂလန်အသင်းနှင့် နယ်သာလန်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါပြီး နယ်သာလန်အသင်းက အချိန်မှာ အနိုင်ဂိုးတွေ သွင်းယူပြီး ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ညကစားမည့် Nations League ဆီးမီးဖိုင်နယ် နယ်သာလန် နှင့် အင်္ဂလန် ပွဲကြို အချက်အလက်
06 Jun 2019 | 834 views ယနေ့ညမှာတော့ Nations League ဆီးမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်အသင်းနှင့် နယ်သာလန်အသင်းတို့ဟာ ည ၁ နာရီ ခွဲအချိန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးက တောက်ပတဲ့အနာဂါတ် လူငယ်ကစားသမားတွေ ၊ အရည်အသွေးမြင့် လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေကို ပိုင်ဆိုင်
နေမာက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ တိုင်းတန်းခဲ့တဲ့ မိန်ကလေးက ဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွ ဖွင့်ချ
06 Jun 2019 | 20,289 views ပီအက်စ်ဂျီ အသင်း၏ ဘရာဇီးလ်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး နေမာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်း ပါရီမြို့ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထား ရပါတယ်။ အခု အဓမ္မပြုကျင်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဘရာဇီးရုပ်သံလိုင်း တစ်ခုမှာ မှာ ဗီဒီယိုတွေနဲ့
ကာတာအသင်းနဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကိုပါအမေရိက ပွဲစဉ်တွေကို လွဲချော်ဖွယ်ရှိတဲ့ နေမာ
06 Jun 2019 | 1,238 views ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှူးနေမာဟာ မနေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ကာတာအသင်းနှင့် ခြေစမ်းပွဲမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုကြောင့် နေမာဟာ မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ ဝမ်းနည်းခဲ့ရပြီး ကိုပါအမေရိကဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖို့တောင် မသေချာဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ข่าวทั้งหมด 685 ข่าว 58 หน้า